यी हुन् आइपिएलमा सबैभन्दा बढी विकेट लिने पाँच खेलाडी, सन्दिप लामिछानेकोनाममा पनि बन्यो नयाँ रेकर्ड « Etajakhabar
यी हुन् आइपिएलमा सबैभन्दा बढी विकेट लिने पाँच खेलाडी, सन्दिप लामिछानेकोनाममा पनि बन्यो नयाँ रेकर्ड
लक्ष्मण ओझा : विश्वको सर्वाधिक प्रतिष्ठित फ्रेन्चाइच क्रिकेट लिग इण्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल)को १२ औं संस्करण भारतमा चलिरहेको छ। आठ टिम सहभागी प्रतियोगितामा विश्वभरका ‘सर्वश्रेष्ठ’ खेलाडी खेलिरहेका छन्। त्यसैले प्रतियोगितामा सर्वाधिक रन बनाउनु अथवा विकेट लिनु खेलाडीका लागि उपलब्धीपूर्ण मानिन्छ। नागरिक दैनिकमा खबर छ । यी हुन् आइपिएलमा सर्वाधिक विकेट लिने पाँच खेलाडी
लासिथ मालिंगा : आइपिएलमा सर्वाधिक विकेट लिने कीर्तिमान मुम्बई इण्डियन्सका लासिथ मालिंगाको नाममा छ। उनले ११६ इनिङबाट १६२ विकेट लिइसकेका छन्। उनले एक पारीमा एक पटक पाँच विकेट र चार पटक चार विकेट लिएका छन्। उनी सन् २००९ देखि आइपिएल खेलिरहेका छन्।
अमित मिश्रा : आइपिएलमा सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडीको सूचीमा दोस्रो स्थानमा छन्, दिल्ली क्यापिटलका अमित मिश्रा। १४२ खेल खेलेका मिश्राले १५० विकेट लिएका छन्। उनले एक पारीमा एक पटक पाँच विकेट र तीन पटक चार विकेट लिएका छन्। उनी सन् २००८ देखि आइपिएल खेलिरहेका छन्।
पियुस चावला : आइपिएलमा सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडीको तेस्रो स्थानमा छन्, कोलकाता नाइट राइडर्सका पियुस चावला। उनले १५४ इनिङ खेलेर १४९ विकेट लिएका छन्। उनले एक पारीमा दुई पटक चार विकेट लिएका छन्। उनी पहिलो संस्करणदेखि आइपिएल खेलिरहेका छन्।
ड्वेन ब्राभो : आइपिएलमा सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडीको चौथो स्थानमा छन्, चेन्नई सुपर किंग्सका ड्वेन ब्राभो। उनले १२५ इनिङ खेलेर १४५ विकेट लिएका छन्। उनले एक पारीमा दुई पटक चार विकेट लिएका छन्। उनी सन् २००८ देखि आइपिएल खेलिरहेका छन्।
हरभजन सिंह : आइपिएलमा सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडीको पाँचौँ स्थानमा छन्, चेन्नई सुपर किंग्सका हरभजन सिंह। उनले १५१ इनिङ खेलेर १४३ विकेट लिएका छन्। उनले एक पारीमा एक पटक चार र एक पटक पाँच विकेट लिएका छन्। उनी सन् २००८ देखि आइपिएल खेलिरहेका छन्।
आइपिएलमा सन्दीपको १३ विकेट : आइपिएलमा नेपालका सन्दीप लामिछानेले १३ विकेट लिएका छन्। दिल्ली क्यापिटलबाट आइपिएल खेलिरहेका उनले चालू आइपिएलका पाँच खेलबाट आठ विकेट लिएका छन्।
उनले अघिल्लो सिजनमा दिल्ली डेयरडेभिल्स (अहिलेको दिल्ली क्यापिटल)बाट आइपिएलमा डेब्यु गरेका थिए। उक्त सिजनमा उनले तीन खेल खेलेर पाँच विकेट लिएका थिए।
सडकमा नाङ्गो अबस्थामा भेटिएकी पुष्पाको रुवाउने कथा । पहिले टिकटकमा भाईरल रहिछिन्, प्रेमीले छोडेकै कारण यस्तो (भिडियो हेर्नुस)
अभिनेत्री रेखाले ठकुरी सँग दोस्रो विवाह गर्ने
बिद्यालयमा केटीहरुको लागि सरकारले सेनेटरी प्याड आधा भन्दा बढी केटाले लगाएको रहस्य खुल्यो !
नामभन्दा बद्नाम कमाएका व्यक्ति हुन् प्रेम आले बाहिरियो मन्त्री आलेको कर्तुत, काण्ड सुन्दा सबै चकित !
यसकारण घातक बन्दै ओमिक्रोन
पछिल्लो समय स्नेही काख नामक सँस्थाले उद्धार गरेको एक बिरामीको कथा सामाजिक सन्जाल र युटुबमा
काठमाडौं । अभिनेत्री एवम् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की नेतृ रेखा थापाले दोस्रो विवाह गर्ने भएकी
काठमाडौं । भारत, बिहारको सारण जिल्लाका एक रोचक घटना भएको छ । त्यहाँको माँझी ब्लकमा
काठमाडौं – राजनीतिमा नामभन्दा बद्नाम कमाएका व्यक्ति हुन् प्रेम आले। नेपाली कांग्रेसबाट राजनीतिक यात्रा सुरु
विश्वकै अग्लो स्थानमा म्युजिक भिडियो छायांकन गर्ने युवाले लेखाए गिनिज बुकमा नाम
नेपाल राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान हरि खड्काविरुद्ध अख्तियारको मुद्दा